Kodiarana 1100 Aluminum Circle Blanks Polishing Mill Finishing 3mm Thickness - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
Shuanglin Jiate dia mamokatra ny faribolan'ny alim-bary izay mahafeno ny fenitra ambony indrindra raha mamonjy ny vidiny. Ny fepetra fanaraha-maso matanjaka tsara dia mitondra anao ireo vokatra mendrika indrindra. Ary amin'ny fitaovam-pitsaboana misy eto an-toerana sy ny orinasam-panjakana, dia tsy maintsy miteny isika, ho takatrao hoe nahoana ny orinasa maro no mifidy an'i Hobe ho mpamatsy azy. Shuanglin Jiate aluminie mifanaraka amin'ny YS / T 429-2000 (fenitra indostrialy Shinoa), GB / T 3880, EN485, ASTM B209.
Aoka ho afaka amin'ny alikaola, Dent, ny fampidirana, scratches, tainkintana, fanodinana oxide, fialàna, korrosion, marika fehiloha, loto ny loto ary fahalemena hafa izay hanelingelina ny fampiasana
1050 Aluminum Circle, 1060 Aluminum Circle, 1070 Aluminum Circle, 1100 Aluminum Circle, 3105 Aluminum Circle, 5052 Aluminum Circle, 8011 Aluminum Circle